It is me. Ko Niknayman.: August 2007
Posted by Ko Niknayman at 3:35 PM Links to this post
၁၊ ယနေ့ ချိန်ခါတွင် စစ်အစိုးရအာဏာပိုင်များဘက်မှ ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူအပေါင်းစားဝတ်နေရေး ဆိုင်ရာ အ ခက်အခဲ အကျပ်အတည်း များကို ငဲ့ကွက်စဉ်းစားထောက်ထား စာနာခြင်းမရှိဘဲလောင်စာဆီ ဈေးနှုန်းများအ ဆမတန် တိုးမြှင့်လိုက်မှု ကြောင့် နောက်ဆက် တွဲ ပေါ်ပေါက်လာသည့် အထွေထွေကုန်ဈေးနှုန်း မြင့်တက်မှု နှင့် နိစဏဓူဝ သွားလာလှုပ်ရှား နေရသော ခရီးစရိတ်များ ကြီးမြင့်များကို စစ်အစိုးရ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ နှင့် ၄င်းတို၏ လက်ဝေခံ၊ ခါးပိုက်ဆောင်၊ ရေပေါ်ဆီ လူတန်းစားများ မှအပ ကျန်ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူအပေါင်း အနေဖြင့် ခါးသီးစွာကြုံတွေ့ ခံစားရလျက် ရှိနေပေသည်၊
၂၊ ရဟန်းရှင်လူပြည်သူအပေါင်း ကြုံတွေ့ ခံစားနေရသော စားဝတ်နေရေးဆိုင်ရာအထွေထွေ အခက်အခဲ အ ကျပ် အတည်း များကို အာဏာပိုင်များဘက်ကလိုအပ်သလို အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများ။ လှုပ်ရှားတက်ကြွသူများက ပြည်သူ့ အခွင့်အရေးနှင့်အညီ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြသမှု အဖြစ်လမ်း လျှောက် ဆန္ဒပြပွဲများ ပြုလုပ်ခဲ့မှုအပေါ် အာဏာပိုင်များဘက်က စွမ်းအားရှင်အမည်ခံ တစ်နပ်စား လူရမ်းကား များ အသုံးပြု အကြမ်းဖက် ဖမ်းဆီးနှိပ်ကွပ်မှုများပြုလုပ်လာခဲ့သည်ကို ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူအပေါင်း မျက်မြင် ကိုယ်တွေ့ ပင်ဖြစ်သည်၊
၃၊ ထိုကြောင့် ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူအပေါင်းအနေဖြင့် မိမိတို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ ခံစားနေရသောစားဝတ်နေရေး ဆိုင်ရာအထွေထွေ အခက်အခဲ အကျပ်အတည်းများကို အာဏာပိုင်များဘက်က လိုအပ်သလို အရေးယူဆောင် ရွက်ဖြေရှင်းပေးရန် အတွက်လည်း ကောင်း။ ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူအပေါင်း အငတ်ဘေးမှ လွတ်မြောက်စေရေး အတွက် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သော အဖမ်းဆီးခံ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများနှင့်လှုပ်ရှားတက်ကြွသူများအားချက်
ချင်း လွှတ် ပေးရန်အတွက်လည်းကောင်း အကြမ်းမဖက်လူထုတိုက်ပွဲကို အရှိန်မြှင့် ဆက်လက် လုပ်ဆောင် သွား ရမည်ဖြစ်ပါသည်၊
၄၊ အကြမ်းမဖက်လူထုတိုက်ပွဲကော်မတီ၏ အစီအစဉ်ဖြင့် ၂၀၀၇ ခုနှစ်။သြဂုတ်လ ၃၁ ရက် ညနေ ၅ နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့ပြည်လမ်း ပြည်သူ့ လွတ်တော်အ ဆောက်အအုံ ရှေ့ပြည်သူရင်ပြင်ကွက်လပ်နေရာတွင်မင်းဆိုး မင်း ညစ် (ရာဇတောဝါ)တို့ ဘေး။ လူမဆန်သောသူ (အမနု၏)တို့ ဘေး။ အငတ်ဘေးတို့ မှကင်းလွတ်နိုင်စေခြင်း အလို့ ငှာပြည်သူတို့ ဆင်းရဲ ဒုက္ခကိုကယ်တင်စောင့်ရှောက်မည့် ရဟန်းသံဃာတော်များကပရိတ်တရားတော် များရွတ်ဖတ်မည့်အပြင် မင်းကျင့်တရားဆယ်ပါးနှင့်အညီ တိုင်းသူပြည်သားများအပေါ်အုပ်ချုပ်မင်း လုပ်ခြင်း မ ပြုနိုင်ပါက တိုင်းပြည်ပျက်တတ်ကြောင်း မြတ်စွာဘုရားရှင်က ပသေနဒီကောသလမင်းကြီးကိုဆုံးမ ဟောကြား တော်မူသည့် ရာဇောဝါဒသုတ်တရားတော် ကိုလည်း ဟောကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုဘေးရန် အပေါင်းမှ ကင်း ဝေးလိုသည့်ပြည်သူအပေါင်းအနေဖြင့်လမ်းလျှောက်ပြီး ပရိတ်တရားတော်များ လာရောက်နာယူကြပါရန် လေး စားစွာဖြင့် ပန်ကြားအပ်ပါသည်၊
၅၊ မြန်မာပြည်တစ်နံတစ်လျားရှိ ပြည်သူအပေါင်း အနေဖြင့်လည်း ထိုနေ့ ထိုရက် ထိုအချိန် (၂၀၀၇ခုနှစ်။ သြ ဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ ညနေ ၅ နာရီ)တွင် သက်ဆိုင်ရာ မိမိတို့ မြို့ နယ်များ အလိုက် ဆရာတော် သံဃာတော်များကိုပင့်ဖိတ်ပြီး အလားတူပရိတ်တရားတော်နာယူပွဲ များ ကျင်းပပြုလုပ်သွားကြပါရန် တိုက်တွန်း နိုးဆော်အပ်ပါသည်။
Posted by Ko Niknayman at 1:36 AM Links to this post
ရခိုင်ပြည်နယ် ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့တွင် ယနေနေ့လည် ၂ နာရီခန့်က စတင်ပြီး ရဟန်းသံဃာတော် အပါး ၂၀၀ ခန့်က ကုန်ဈေးနုန်းကြီးမြှင့်လာမှူကိုဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်သည့် အနေဖြင့် ဆန္ဒပြပွဲတရပ်ကို ပြုလုပ် ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အမည်မဖေါ်လိုသူ ရဟန်းတော် တပါးက “ဦးဇင်းတို့ စုစုပေါင်း သံဃာ အပါး ၂၀၀ လောက်က ဓည၀တီအားက စားကွင်း အထူးတန်း ပွဲကြည့်စင် မှာ စုဆုံပြီးတော့ နေ့လည် ၂နာရီနန့် ၁၅ မိနစ်မှာ စတင်ပြီး မေယုလမ်း အတိုင်း ချီတက်ကြပြီး အဲဒီလမ်းက တဆင့် မင်းဗာကြီးလမ်းအတိုင်း ချီတက်ကြပါတယ်။ မင်းဗာကြီး လမ်းကတဆင့် စစ်တွေ လမ်းမကြီးကို ချီတက်ပြီးလမ်းမကြီးကတဆင့်လောကာနန္ဒာစေတီတော် ရောက်ပြီးလူစု ခွဲလိုက်ကြပါတယ်။ ဦးဇင်းတို့ကတော့တပည့်တကာတွေ ဒုက္ခရောက်တာကိုကြည့်မနေနိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့် တ ပည့် တကာတွေအတွက် ဆန္ဒပြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။” ဟု ပြောသည်။
မျက်မြင် တဦးက “ဦးဇင်းတွေက အများကြီးပါဘဲ။ စစ်တွေက အရေးကြီးတဲ့ လမ်းတလျောက်ကို ချီတက်ဆန္ဒ ပြကြတာပါ။ ကုန်ဈေးနုန်းကျဆင်းရေး တခုတည်းကိုဘဲ ဦးဇင်းတွေ ကြွေးကြော်ပြီး ဆန္ဒပြကြတာပါ။ အရပ် သားတွေ ကျောင်းသားတွေနဲ့ မရောနှောပါဘူး။ လူတွေကလမ်းဘေးကနေကြည့်ရှု့ အားပေးကြပါတယ်။ နေ့ လည် ၃ နာရီလောက်မှာ လူစုကွဲသွားတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။” ဟု ပြောသည်။
ယခုအခါစစ်တွေမြို့အခြေနေမှာအေးဆေးငြိမ်သက်နေသော်လည်းတခုခုပြဿနာ ပေါ်ပေါက်မည့်အနေအထား မျိုးကဲ့သို့ဖြစ်နေကြောင်း အဆိုပါမျက်မြင်ကပြောသည်။စစ်တွေတက္ကသိုလ်ရှိ ကျောင်းသားများအားလည်း နေ့ လည် ၃ နာရီမှ စတင်ပြီး ကျောင်းမှ ပြန်လွတ်လိုက်ပြီး တက္ကသိုလ်ကျောင်းကို ပိတ်ထားမည့် အနေအထားသို့ ရောက်ရှိ နေကြာင်း သတင်းရရှိသည်။
ယနေ့ နေ့လည်၃ နာရီခန့်က ဒေသဆိုင်ရာကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ်မှူး ဗိုလ်မှူးကြီး သန်းထွန်းအောင် ပြည်နယ်သံ ဃာ့ကောင်စီ ဥက္ကဌ ဆရာတော်ကြီး အပါအ၀င် ပြည်နယ် ၀န်ဆောင် ဆရာတော်ကြီးတွေကို ရခိုင်ပြည် နယ်ရုံးသို့ ပင့်ဖိတ်ပြီးအဓိဂရုဏ်းမဖြစ်ပွားရအောင် ဓမ္မစက်ဖြင့် ၀ိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းပါရန် လျောက်ထား ကြောင်း သိရှိရသည်။
နောက်ဆုံးရရှိသော သတင်းအရ ခလ၇ ၂၀ မှ စစ်သား အင်အား ၂၀၀ ခန့်ကို လောကာနန္ဒာစေတီတော်အနီး တ၀ိုက် ဖြန့်ကျက် ချထားလိုက်ပြီး ခမ၇ ၂၃၂ နှင့် ၃၄၄ တို့အား စစ်တွေမြို့ရှိ အရေးကြီးသော နေရာများတွင် ယနေနေ့ညနေက စပြီး ဖြန့်ကြက် ချထားလိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Posted by Ko Niknayman at 1:22 AM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 1:19 AM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 1:11 AM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 4:27 PM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 9:04 PM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 7:38 PM Links to this post
မင်းမဲ့စရိုက်ကို ဘယ်သူတွေက ဖန်တီးသလဲ။ မင်းမဲ့ စရိုက် ကို ပေါ်ပေါက် စေတဲ့ နအဖ နဲ့နအဖ ရဲ့ လက်ပါးစေ တွေ က ဖန်တီးတယ်။ ဘယ်လိုဖန်တီးသလဲ။ ဒီလိုလေ။ လက်နက်ကိုင် အင်အား တွေကို တိုးချဲ့ ထား တယ်။ အကြမ်း ဖက် နှိမ်နင်းရေး သင်တန်းတွေ ပို့ချတယ်။ အကြမ်းဖက် မှု အခြေအနေ တွေကို စတင် ပြုလုပ် တယ်။ အကြမ်း ဖက်လို့ ရအောင် အကွက်ဆင် ပေးတယ်။ အကြမ်းဖက်ခွင့် ပေးထားတယ်။ အကြမ်းဖက် ရဲအောင် အခွင့် အရေး တွေနဲ့ပေးပြီး မြူဆွယ်တယ်။
Posted by Ko Niknayman at 11:20 PM Links to this post
ယမန်နေ့ ည သန်းခေါင်က (၈၈) မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များနှင့် ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားဆောင် ရွက် သူများအား (နအဖ) စစ်တပ်မှ မည်သည့်အကြောင်းပြချက်မှမရှိဘဲ မတရား ဖမ်းဆီးသွား ခဲ့သည် ဟု သိ ရှိရသည်၊
“နအဖ စစ်အုပ်စုအနေနဲ့ယခုလို မတရားဖမ်းဆီးဖိနှိပ်နေမှုများဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကောင်း ကျိုးတွေ ကို ပစ်ပယ်ပြီး ဆိုးကျိုးများ ကိုသာ ဖန်တီး ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ လုပ်ရပ်များပဲ ဖြစ်တယ်၊ နအဖ စစ် အုပ်စုရဲ့လုပ် ရပ် များကိုပြင်းထန်စွာ ရှုတ်ချပြီး အဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့ မင်းကိုနိုင် ခေါင်းဆောင်တဲ့ (၈၈) မျိုးဆက်ကျောင်း သား များနဲ့ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်သူများကို အမြန်ဆုံးပြန်လွှတ် ပေးဖို့တောင်း ဆိုတယ်၊ ” ဟု ပြော ကြားလိုက်ပါသည်၊
မိမိတို့မကဒတအနေဖြင့်လည်း ဒီမတရားမှု များကို မြန်မာပြည်သူလူထုကြီး၊ (၈၈) မျိုးဆက်ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ များနှင့်အတူ တဆက် တစပ်တည်း၊ တသားတည်း ရပ်တည် တိုက်ပွဲဝင် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သဘောထားထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်၊
Posted by Ko Niknayman at 7:38 AM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 7:35 AM Links to this post
အထူးဖိတ်ကြားထားသူ (၃)ဦး. ဟောပြာချက်များ၊( မိနစ်-၂၀ စီ)၊ အခမ်းအနားကို ကမ္ဘာမကြေသီချင်း သံပြိုင် ဆို၍ ရုပ်သိမ်းမည်၊
၃။ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ကြမည့် ပြည်သူလူထုကြီးအနေဖြင့် အကျီင်္အဖြူရောင်များ ၀တ်ဆင်လာ ကြပါ ရန် မေတ္တာရပ်ခံ နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
Posted by Ko Niknayman at 7:32 AM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 7:28 AM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 7:20 AM Links to this post
နောက်ဆုံး တောဝက်ထုဟာ ညီညာ စွာနဲ့တောဝက် တို့ နေထိုင်ရာ အေးချမ်း သာယာတဲ့တောအုပ်ကြီးထဲ မှာ ရိုးသားစွာနဲ့တစ်သက်လုံး အတူတစ်ကွ နေထိုင်သွားကြလေသတဲ့။
Posted by Ko Niknayman at 7:15 AM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 7:13 AM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 7:12 AM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 7:10 AM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 7:06 AM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 9:02 PM Links to this post